Ukuyeka i-porn: uqaphele ingxaki ye-pornography | Umvuzo weZiseko
Ikhaya Ukuyeka Ukuzixhamla Indlela yokujonga ingxaki yezononophelo
Ngaba wena okanye umntu osondelene nawe unenkinga ngezononografi? Eli candelo linikeza iindlela ezine zokugweba ukuba i-intanethi ye-intanethi ibangela ingxaki.
Okokuqala, ukufika kwe Iifoto zoonografi ezifutshane uye wenza lula ukuxilongwa kumbuzo emihlanu kuphela, kunye ne80% yokuthembeka. Uya kufumana imiyalelo yokusebenzisa uvavanyo lovavanyo ngokwalo.
Okwesibini, kukho ividiyo elula Imibuzo unokuthatha, uzuko lweGabe Deem kwiReboot Nation.
Okwesithathu, kukho iCape Consumer Scale eboniswe ngezantsi. Isekelwe kwimizila kunye nokunyaniseka kwe-intanethi yokusetyenziswa kwamanyala. Sebenzisa isilinganisi sokuzihlola okanye usebenze nomnye umntu ukuba abone ukuba bahlaselwa.
Okwesine, amadoda angathatha uvavanyo olulula olwenziwe ukuba luncede ukuba bachonge ukuba ingaba i-intanethi ye-intanethi iyinxalenye ebalulekileyo yeengxaki zentsebenzo yesondo abanokuba nazo. Nantsi i Uvavanyo lweZenzo zoSondo ngoBantu.
Itheyibhile elandelayo ibonisa izikhokelo zokuzihlola. Iquka amanqanaba okusetyenziswa koononophelo kunye neempembelelo ezinokuba nazo kuwe nakubantu abakujikelezile. Akunakuthetha ukumboza yonke imeko, kodwa kufuneka kukuncede ukuba ucinge malunga nokuba ubonobumba buphi ebomini bakho kwaye ukuba lukhokelela kwiingxaki.
Ukuvavanya ukuba uninzi oluphandleyo oludliwayo lufuna incoko enyanisekileyo, nangona kuwukuphela kwakho. Uphi impendulo yangempela kwi-Yintoni eyenzekayo? ikholomu.
Khumbula ukuba akukho nto ephosakeleyo yokuzama ukuyeka ukuyila. Ukuba kuvela ukuba ubanjwe nguwe, kukubangela iingxaki zangempela ebomini bakho kwaye awukwazi ukulawula ukusetyenziswa kwakho, uya kufuna uncedo ukuyeka. Ixesha lokubuyiselwa liyakutyeba kodwa kukho uncedo oluninzi olufumanekayo ukuba uncede ukuphinda uphinde uphile impilo yakho yesondo.
Ekugqibeleni, phantse bonke abasebenzisi bokuqala bafumana ubomi buphucula kakhulu emva kokuba iifestile ziyeke ukuba yingxenye yobomi babo. Qala namhlanje!